Wararkii ugu dambeyeey Dagaal duleedka Ceerigaabo ku dhexmaray Jabhada Caare & Somaliland (Daawo) – Radio Daljir
Wararkii ugu dambeyeey Dagaal duleedka Ceerigaabo ku dhexmaray Jabhada Caare & Somaliland (Daawo)
Luulyo 10, 2019 2:40 g 0
Deegaanka Dhoob oo ka tirsan gobolka Sanaag oo qiyaastii 45 KM u jira magaalada Ceeri Gaabo waxaa saaka dagaal xoogan uu ku dhexmaray ciidamo uu hogaaminayay korneel Caare iyo ciidamada maamulka Soomaaliland.
weerarka ayaa waxaa soo qaaday ciidamada Soomaaliland kuwaas oo beegsaday Jamhada korneel Caare oo ku soo jeeday degmada Qardho.
dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo kala gaaray labada dhinac.
dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay dagaalkii maanta.
Hadaba mid kamid ah wariye yaasha ku sugan magaalada Ceerigaabo ayaa Faadumo Deggan Daahir waxa uu uga waramay dagaalka iyo sida uu saaka ku bilowday.
Hoos ka daawo Waraysiga.